Chikafu chekudya chamangwanani cheItaly muRome | Absolut Kufamba
Rimwe remaguta akanaka kwazvo uye anonakidza muEurope iRoma. Inobatanidza zvishoma zvezvose, pakati penhoroondo, hunyanzvi uye gastronomy. Chero ani mufambi anoifarira kubva pakubuda kwezuva kusvika pakati pehusiku, saka unofanirwa kutanga zuva nekudya kwekuseni kwakanaka, a chaihwo chisvusvuro muRome.
Ndinoda zvekudya zvekudya zvemangwanani, kunyanya pandiri kufamba uye vanomiririra inowedzerwa simba rekuwedzera kuti utange zuva, mukana wekuravira zvinonaka zvemuno, kuti ndinzwe chikamu chidiki chenzvimbo iyo yandiri kutsvaga. Asi chii chatingadya mangwanani muRoma?
1 Kudya kwemangwanani muRoma
2 Kupi kwekudya kwekuseni muRome
Kudya kwemangwanani muRoma
Kudya kwese kwakakosha muItari, nyika ine chikafu chinonaka, saka ngatitorei mukana wekutanga zuva nekudya kwemangwanani kwakanaka. Zviripachena, iyo protagonist iyo isingamboshayike ikofi uye mune yakajairika uye yakakurumbira menyu yezvose pane imwe pastry. Ipapo, chisvusvuro chakajairika uye chakareruka muRome kofi uye makeke neimwe bota kana jam, zvimwe biscuit kana kuki.
Uchawana iyi menyu mudzimba dzevaRoma kana musupamaketi, asi Kuva nekudya kwekuseni kunze, mubhawa, ndeimwe mhando yechiitiko.
Kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chakasiyana, saka rimwe zuva iwe unofanirwa kusvetuka hotera yekudya kwemangwanani uye kubuda uye kunotsvaga imwe yakawanda yeRoma yekudya kwekuseni. Pano isu tave kutotaura nezve kofi uye chimwe chinhu chinotapira kuti uende nacho: bomba, ciambella, maritozzo kana cornetto.
Ngatitangei nekofi. MaTaliyane anoda kofi uye nesuwo, saka pakudya kwemangwanani sarudzo dzakajairika kofi nhema, cappucino, kofi nemukaka, caffe lungo, caffe freddo, caffe al vetro ... tsime, pane duramazwi rose saka ngatirerutsei zvishoma zvinhu. Chinangwa:
Kofi: espresso yakapfava. Iyo inouya mune kapu diki, muhuwandu hushoma uye yakanyanya kusimbiswa. Iwe unogona kuwedzera imwe mukaka kana shuga kwairi.
Macchiato kofi: iyo kofi ine donhwe remukaka unopisa.
Cappuccino: kofi ine mukaka wakanyoroveswa, yakanyorova.
latte macchiato: girazi refu remukaka unopisa nekofi ye espresso.
Coffee Lungo: Inoshumirwa mumukombe we espresso uye ndizvo zvazviri, espresso ine imwe mvura inopisa.
Dzese idzi shanduro dzekofi yeItari dzinoitwa neyakajairwa: iyo kofi ye espresso. Kana iwe usingaifarire, iwe unogona kugara uchihodha iyoAmericano mumukombe muhombe, unonyanya kudiridzirwa.
Izvo zvine chekuita nekofi, ikozvino zvakanaka, maererano ne pastry isu tine akati wandei sarudzo. Imwe ndeye maritozzi, mbiriso inotapira kunova ndiko kugona kweRoma. Nhoroondo yacho ndeyekuti muMiddle Ages munaKurume 1 maritozzo yakapihwa mudiwa, uye izvo zvakavanzwa mukirimu panofanira kunge paine chishongo kana mhete.
Iyo hombe asi yakareruka bundu uye inowanzo zadzwa nekwapurwa kirimu. Inorema kwazvo? Iyo inofambidzana nekofi uye iwe unogona kuigovana, iyo pfungwa inogara iri yekuyedza. Kune maritozzi akanaka kwazvo kuIl Maritozzaro, Roscioli Caffe kana Pasticceria Regoli. Zvakanakisa!
Imwe yakakurumbira mangwanani emangwanani bun ndiyo cornetto. Muchokwadi, chikafu chinowanzoitwa chisvusvuro cheItaly inongova kofi yeappappino ine cornetto.
Cousin wa croissant french Aya mabhanzi anowanzo gadzirwa nemafuta panzvimbo pebota, saka vane hunyoro, kuravira kunotapira. Cornetto inogona kuuya "Nyore" kana kuzadzwa nejamu, jam, kana kirimu. Pane sarudzo dzakanaka, kana dzakanyanya kukuremera, uyezve kune akakosha cornettosndiko kuti, zvakagadzirwa nehupfu hwakakwana uye hwakazadzwa neuchi.
Unodyira kupi chibage chakanakisa? Zvakanaka unogona kugara pasi kuti unwe kofi uye udye chibage Caffe Chinyorwa, kuPizza del Risorgimento, kana ku Pasticeria Barberini, munharaunda yeTestaccio, kana pamberi penzvimbo ino, mu Tram Depot. Kana iwe usiri kuda kofi saka yakanakisa pastry muRome iri Panificio Bonci, muchiPrati.
Kana chikafu chamangwanani chevaRoma chine chimwe chinhu senge croissant, uye chosiya maFrance agutsikana, zvakare ine chimwe chinhu senge donut uye chinokwezva maAmerican. Mune ino kesi isu tiri kutaura nezve iyo ciyambella.
Kunge donut, iri mukanyiwa wakakangwa uye une bhati reshuga saka kana uchiruma mukati mayo, inodonha zvishoma uye muromo wako uzere nesipi. Iwo akanakisa maambambo anotengeswa muLinari, paVía Nicola Zabaglia, 9.
Imwe yakajairwa bundu yeiyo pastry yeRoma yekudya kwekuseni ndiyo bhomba, kana bhomba, rakareruka rakakangwa bhanhi rakazadzwa necustard.
Chipo ichi chinoenderera nemamwe mabhanzi akajairika ayo anotengeswa mune mamwe ma cafes uye mapakeji akabatanidzwa. Semuenzaniso, pakati peRome nzvimbo yakadai iri Roscioli Caffe, iri pakati peGhetto yechiJuda uye Campo de'Fiori. Kunyangwe iri nzvimbo inodhura kuve nekudya kwekuseni rimwe zuva, unogona kuzviita uye kunakirwa nehunhu hweDanish kana crostata yayo, makeke anotapira nemaapuro nemaamondi ayo anonaka.
Parizvino zvinotapira, handizvo here? Saka kana iwe uri mumwe wevaya vanoda chinhu chine munyu unogona kuperekedza kofi ne tramezzini. Iwo mativi matatu echingwa chena crumb uye mayonesiise nekuzadza kwakasiyana. Ivo havana basa hombe. Ehezve, iwo anotaridzika zvakanaka kwazvo. Kana iwe ukaenda kuJapan uye ukadzoka unofara nerudzi urwu rwemasangweji, avo vari muRome vanokuodza moyo zvishoma. Zvichengete mupfungwa.
Pakupedzisira iwe unokwanisa sanganisa zvinotapira uye zvine munyu in a zvakajairika brunch, kudya kwemangwanani kwakanonoka kana kudya kwemangwanani. Iyi tsika yeAmerica yatenderera pasirese!
Kupi kwekudya kwekuseni muRome
Zviri pachena, brunch haisi yako chaiyo yeRoma mangwanani emangwanani asi iri tsika yakave yakakurumbira uye inosanganiswa muguta pamwe nekudya kwayo kwekudya kwemangwanani. Nekudaro, pamusoro penzvimbo dzataive tichidana mazita, tarisa vamwe ava:
Marigold Roma, paVia Giovanni da Empoli, 37) ndiyo yekutanga sarudzo. Iresitorendi ine bhekari diki inogadzira chingwa chakagadzirwa, sinamoni mipumburu, organic yogati, granola, pancake, mazai nezvimwe zvakawanda. Wedzera yakasarudzika kofi uye refu uye yakapfuma rondedzero yetii uye iwe une yakakwana brunch.
kofi snack: Ino inzvimbo inozivikanwa kwazvo pakati pevaRoma, nyanzvi mune croissant ine pistachio yekuzadza. Iyo brioche zvakare yakanaka uye pasika yayo yese inomira kunze. Zviri paVia Luigi Magrini, 6.
Tsangamidzi: iri muchikafu chekudya zvine hutano. Iresitorendi inoshumirawo chisvusvuro: kune maSmoothies, mapekeki, mazai uye ham, cornettos nekofi. Via Borgognona, 43-46.
Nero Vaniglia: inotanga mangwanani, mhando 6 am. Iine chimiro chemazuva ano nekicheni yose iri kuona. Zvese zvakagadzirwa mushe uye zvakanakisa ndezve akanaka ine mousses akasiyana siyana. Iri pakati peOstiense naGarbatella, Circonvallazione Ostiense, 201.
Coromandel: Iyo iri padhuze nePiazza Navonna uye inoshandira zvinonaka zvinonaka kubva pasirese pasirese. Iri paVia di Monte Giordano 60/61.
Maté: apa iwe uchaedza zvakanakisa pasticciottos kubva kuRoma. Ivo chikamu che zvakajairika Puglia kwekuseni uye vari pamenu yeiyi chikafu cheni ine matavi matatu muRome. Imwe iri muPazza Bologna, imwe muSallustiano uye imwe muAfrican Quarter. Iwe unogona zvakare kuyedza inonaka panzerotti uye focaccias. Via Lorenzo il Magnífico, 26, Via Venti Settembre, 41 uye Viale Eritrea, 108.
Bar Benaco: nzvimbo ino yakanaka, yakapusa uye inonaka. Iyo inogara ichizvidzokorora pachayo uye chakanakisa chinhu chainoita ndeye croissants. Iri muVía benaco, gumi nematatu.
Cafe delle Comari: unogona kusarudza kugara kubhawa kana patafura. Mhando dzakasiyana dzema scones dzakanaka uye vashandi vanoteerera. Iri padyo neVictoria saka inzvimbo yakanaka kana mushure mekutanga nzendo dzako munharaunda. Vía Santamaura, 22. Vhura kubva Muvhuro kusvika Svondo kubva 7am kusvika 9 pm.
Cafe Novecento: Iine yakanaka tii kamuri uye yakawanda yevaRoma yekutaura navo.Iyo inoshumira mangwanani kusvika masikati. Via del Governo Vecchio, gumi nemaviri.
LI.BE.RA + munguva pfupi: ino ndiyo yekutanga yekudyira yakavhurwa inoshandira mangwanani, masikati uye nguva yekufara. Iri padyo nePizza Navona uye inotonhorera kwazvo. Iri paVia del Teatro Pace, 41.
Mutsvene Eustachio il Caffè: iri kutenderedza pantheon uye inozivikanwa nekugona kwekofi yayo nyowani yepasi. Pizza di S. Eustachio, 82. kubva 7:30 am.
Izvi ndezvimwe zveimwe sarudzo kuti unakirwe ne zvakajairika zvekudya kwekuseni kweItaly muRoma, asi havazokusiye.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Chikafu chemangwanani cheItaly muRoma
Ndinoda peji ino.
Iko kukanganisa kufunga kuti panino uye kwete panini, inova yakawanda, chikamu chekudya chamangwanani. Chikafu chamangwanani cheItaly chine zvinhu zvinotapira chete, hapana chine munyu. Iyo panino inotengeswa chero nguva kune avo vatove nekudya kwekuseni kwemaawa uye vane nzara senge yemambakwedza-tudyo.
nyemwerero yekupa kutenda akadaro
Kumba, kusanzwisisana kunowanzoitika zvakanyanya nekuda kweiyo
kurongeka uye ndosaka IKEA ichipa Emoticons, chishandiso
kutaurirana kuve nechokwadi chekunzwisisa kumba.
Nezve Android, zvinotarisirwa kuti ramangwana rekuvandudza riite
pinda chaizvo zvakafanana modhiyo yekuratidzira. , Furanzi,
Germany, Italy, Pazasi pekhibhodi, iwe uchakwanisa kuona akasiyana emoji madingindira e
Sarudza. Chiratidzo chewachi kuruboshwe chinokuratidza chazvino
iyo yawakashandisa. Zvakare inowanikwa autocorrect, 30
Maduramazwi emitauro yakakosha, Pane yangu nharembozha mbozhanhare (Menyu - Zvirongwa - Mutauro uye Keyboard) ipapo chete
gonesa kuti iko kunyorera kwandanga ndatora pasi kunoshandiswa zvakare uye ndizvozvo, zvakandishandira
Pindura kumanyemwe ekuti maita basa